तपाईलाई थाहा छ, कुन राशिका प्रेमी कस्ता हुन्छन् ? (राशिफल) | Rajmarga
तपाईलाई थाहा छ, कुन राशिका प्रेमी कस्ता हुन्छन् ? (राशिफल)
मेष राशि भएकाहरु आकर्षक र प्रभावशाली हुन्छन् । यो राशि भएका पुरुषमा स्त्रीलाई चाँडै पट्याउने क्षमता हुन्छ । उनीहरु हतारमा प्रेममा पर्छन, त्यसैले उनीहरुको प्रेम प्रायः दिगो हुँदैन । उनीहरु कामुक र रोमान्टिक हुन्छन् । बिछोडको पीडाबाट उनीहरु चाँडै बाहिर निस्किन्छन् ।
वृष राशिका मानिस उत्तम श्रेणीका प्रेमी मानिन्छन् । प्रेममा चाँडै पर्ने उनीहरुको स्वभाव हुन्छ । उनीहरुमा भावकुता पनि बढी हुन्छ । प्रेमिका अथवा जीवनसाथीलाई उनीहरु अधिक माया गर्छन् । दिगो सम्बन्धमा उनीहरुको विश्वास हुन्छ । यिनीहरुको दाम्पत्य जीवन सुखमय हुन्छ ।
मिथुन राशि भएका मानिस जीवनमा धेरैसँग प्रेममा पर्छन् । उनीहरुले बहुविवाह गर्ने सम्भावना बढी हुन्छ । विपरीत लिंगीप्रति उनीहरु छिट्टै आकर्षित हुन्छन् । अरुको मनसँग खेल्ने उनीहरुको स्वभाव हुन्छ । विवाहलाई त्यति महत्व दिँदैनन्र विवाहेत्तर सम्बन्धमा रुची राख्छन् । उनीहरुको मन चन्चले हुन्छ ।
कर्कट राशि भएका मानिस ‘मुढी’ हुन्छन् । तर, प्रेम सम्बन्धप्रति भने इमान्दार हुन्छन् र इमानदारिताका साथ आफ्नो कर्तव्य पूरा गर्छन् । परिवारको हस्तक्षेपका कारण उनीहरुको प्रेम र वैवाहिक जीवनमा बारम्बार समस्या आउने गर्छ । प्रेमी अथवा प्रेमिकाको भावनालाई उनीहरु सम्मान गर्छन् । विवाहपछिको उनीहरुको जीवन सुखमय हुन्छ । अहं मौकामा प्रेमसम्बन्धी निर्णय लिने क्षमता उनीहरुमा कमजोर हुन्छ ।
सिंह राशि भएकाहरुाके बोली असाध्यै मीठो हुन्छ । स्त्रीलाई आकर्षित गर्न सिंह राशि भएका पुरुषले आफ्नो बोलीलाई हतियार बनाउँछन् । उनीहरु उदार पिवचारका हुन्छन् । उनीहरुको प्रेम अक्सर सफल हुन्छ । सिंह राशि भएका मानिस आदर्श प्रेमी हुन्छन्। जीवनसाथी अथवा प्रेमिकाप्रति उनीहरु इमानदार हुन्छन् ।
कन्या राशि भएका मानिस ‘महान प्रेमी’ बन्न सक्दैनन् तर ‘असल प्रेमी भने बन्न सक्छन् । उनीहरुको व्यक्तित्व आकर्षक हुन्छ । विपरितलिंगीलाई आकर्षित गर्न उनीहरु खप्पिस् हुन्छन् । परिवार र श्रीमतीप्रति निष्ठावान भएकाले उनीहरुको वैवाहिक जीवन बलियो हुन्छ । प्रेममा शारीरिक सुखलाई मात्र प्राथमिकता नदिने उनीहरुको स्वभाव हुन्छ ।
तुला राशि भएकाहरु महान प्रेमीका श्रेणीमा पर्छन्। उनीहरुले प्रेमको गहिराई बुझेका हुन्छन् । एक्लै रहन मन पराउँदैनन् । दुःख परेको बेला साथीभाइ अथवा प्रेमी प्रेमिकाबाट साथ खोज्ने उनीहरुको स्वभाव हुन्छ । उनीहरुको व्यक्तित्व आकर्षक हुन्छ । प्रेमलाई पवित्र बन्धन मान्ने स्वभाव उनीहरुको हुन्छ ।
बृश्चिक राशि भएका मानिस विवाहअघि आदर्श प्रेमी हुन्छन् । प्रेमका निम्ति जस्तोसुकै त्याग गर्न पनि सधैं तयार रहन्छन् । उनीहरु प्रेमप्रति पूर्ण इमान्दार हुन्छन् । उनीहरुमा ईर्स्याभाव पनि बढी हुन्छ । उनीहरुलाई रोमान्टिक प्रेमीका श्रेणीमा राख्न सकिन्छ ।
धनु राशि भएका प्रेमी संवेदनशील र हँसिमजाक गर्ने खालका हुन्छन् । असल प्रेमी–प्रेमिका भए पनि लामो समयसम्म सम्बन्ध कायम राख्न भने उनीहरु असमर्थ हुन्छन् । जोडी फेरिरहने उनीहरुको स्वभाव हुन्छ । प्रेममा धोका पाएलगत्तै उनीहरु तुरुन्तै अर्को प्रेमको जोहो गरिहाल्छन् ।
मकर राशि भएका मानिस जिद्दी स्वभावका हुन्छन् । यस्तै स्वभावका कारण उनीहरुको प्रेम जीवनमा बाराम्बार समस्या आउने गर्दछ । प्रेमिका अथवा जीवनसाथीलाई अधिक माया गरे पनि जिद्दी स्वभावका कारण उनीहरुको सम्बन्धमा खटपट परिरहन्छ
कुम्भ राशि भएका मानिस बढ्ता भावुक हुन्छन् । दिमागबाट भन्दा बढी मनबाट परिचालित हुन्छन् । मुडी हुने भएमाले उनीहरुको प्रेम चिरस्थायी हुँदैन । कुनै अपरिचितसँग पनि उनीहरु निःस्वार्थ प्रेम गर्न पुग्छन् । जीवनसाथीलाई आँखा चिम्लिएर विश्वास गर्ने स्वभाव उनीहरुमा हुन्छ ।
मीन राशि भएका प्रेमी बढ्ता भावुक हुन्छन् । विपरीत लिंगीप्रति उनीहरु छिट्टै आकर्षित हुन्छन् । मीन राशि भएका मानिसलाई मायामा पार्न सजिलो हुन्छ । उनीहरु अटुट सम्बन्ध कायम राख्न चाहन्छन् । धोका पाउनेमा यिनीहरु नै सबैभन्दा अगाडि हुन्छन् ।
Previous post: आमाको उपचार गर्न काठमाडौ आएकी युवती नक्क्ली डाक्टरबाट बलात्कृत
Next post: मौसुफको सवारी, तन्त्र गए तुजुक गएन